That's so good, right?: A Most Memorable Trip
အံ့အားသင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ နွေဦးရာသီကို ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါသည်။ ဥရောပမှာရှိသော မြို့များစွာကို စရိတ်ငြိမ်းသွားရောက် လည်ပတ်ခွင့် ဆုကိုရရှိခဲ့တာကြောင့်ပါ။ လောလောဆယ် နယုးယောက်မြို့ ကနေဒီလေဆိပ်က အခြားအနိုင်ရရှိခဲ့သူနှစ်ဦးနှင့် အတူ ဂျက် လေယာဉ်ကြီးတစ်စင်းနှင့် ထွက်ခွာခဲ့ကြတာပေါ့ ခရီးစဉ်အစကို။ မြောက်ပိုင်း Missouri မှာရှိတဲ့ State Teachers College ရဲ့ ပထမနှစ် ကျောင်းသားဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်အသက် ကလည်း ၂၁နှစ်သို့ကူးပြောင်းခဲ့ပြီဆိုတော့ ဒီခရီးစဉ်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကဲဖို့ အသင့်ဖြစ်နေ ပါပြီ။ ပလုံစီနေတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ပူဖောင်း တွေပေါ် ကျွန်တော်က ဟိုခုန်သည်ခုန်။
လေယာဉ်ပေါ် အခြားအနိုင်ရသူ လူငယ်တစ်ယောက်နှင့်အတူ ယှဉ်တွဲထိုင်ဖြစ်ကြပါတယ်။ စကားတွေပြောဆိုကြရင်း တဖြည်းဖြည်းနှင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သွားကြတာဗျ။ ကျွန်တော်တို့ Paris ရောက်ရင် တစ်ခန်းထဲအတူတည်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ ဒီလေယာဉ်က Paris, Rome, Athens, Madrid, Veniceနှင့် Berlin မြို့များကို လေးရက်သုံးည အချိန်ဖြုန်းရမယ့် ခရီးစဉ်ရဲ့ ပထမဆုံးစီးနှင်းမှုပေါ့လေ။ ကျွန်တော် ပီတိလည်းဖြစ်မိသလို ကျေလည်းကျေနပ်ရပါတယ်။ တစ်သက်တာ အချိန်တစ်ခုရဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ပါပဲ။ သတင်းစာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်မှာ essay တစ်ပုဒ်ပါဝင်ရေးသားယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြင့် ဒီ trip ကို အနိုင်ဆုရရှိခဲ့ခြင်းပါ။ ကံကောင်းလို့သာ ရရှိခဲ့ခြင်းလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ထဲထဲဝင်ဝင် မကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ အတွေးထဲမှာလာ တဲ့အတိုင်း ရေးသားခဲ့ရုံလေးမို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ လေယာဉ်ဆိုက်တာနဲ့ စီစဉ်ပေးထားတဲ့ ဟိုတယ်မှာ check in အတူလုပ်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်အထုပ်ကိုဆွဲ အခန်းထဲ သူ့ နေရာသူ ပစ္စည်းတွေကို နေရာချပေါ့။ လေယာဉ်ပေါ်ထိုင်နေခဲ့ရတာ ကျောပူတယ်လို့ ခံစားရပြီး မွေ့ယာကြီးပေါ် ခဏလှဲ မျက်စိမှိတ် အနားယူလိုက် ချိန်ခဏ David ရဲ့ အထူးအထွေမဟုတ်တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် အထူးဖြစ်နေသော မြင်ကွင်းကို မျက်စိအဖွင့်မြင်လိုက် ရပါတယ်။ brief ဘောင်းဘီလေး နဲ့ အခန်းထဲ ဟိုသည်လျှောက် ပြီးတော့ တစ်ချို့အချိန်မှာ အ၀တ်မပါ။ David အနေနဲ့ နည်းနည်းလေး များ ရိပ်မိနေမလားတော့မသိ။ ကျွန်တော် သူ့ကို အဲဒီအနေအထားနှင့်မြင်ရတာ အပေါ်အာရုံစိုက်နေတာကိုလေ။ အ၀တ်မပါတဲ့ ဘယ် အမျိုးသားကိုမဆိုကြည့်ရတာ ကျွန်တော် ကြိုက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် David လိုကောင်ချောလေးတွေမျိုးဆိုရင်။
ပထမဆုံးအကြိမ် David ကို အ၀တ်မပါမြင်ရချိန်မှာ ကျွန်တော် ကိုယ့်လျှာကိုကိုယ်မျိုချမိသလိုပဲ။ ဟိုတယ်မှာ အဦးဆုံးတည်းခိုရတဲ့ ညမှာပဲပေါ့။ နှစ်ဦးသားနွမ်းနယ်နေကြတာဆိုတော့ ရေချိုးသန့်စင်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ အဲဒါ David က အရင်ရေချိုးတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အ၀တ်မပါ ဗလာကိုယ်တည်းနဲ့စောင့်တာ ခုတင်ပေါ်ကနေ။ ဟီး....ခါးမှာ တဘက်တစ်ထည်ပတ်လို့ပေါ့နော်။ အပြင်ကိုငေးနေတဲ့ ခဏ David ရေချိုးသံတိတ်သွားတာကြောင့် လှည့်ကြည့်မိတာ ကျွန်တော်နှင့် ခြေလှမ်းသုံးလှမ်းအကွာမှာ ဆံပင်တွေ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ခြောက်အောင်သုတ်နေသော သူ့ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဘော်ဒီက အားကစားသမားတွေလို အတောင့်စားမဟုတ်ပေမဲ့ အဆင်ပြေပါ့။ ရင်ဘတ်က အမွှေးတွေဟာ ဆီးစပ်ကခြုံပုတ်နှင့် တဆက်တည်း။ '၀ိုး' သူ့-ိင်တံကလည်း မာပြီးထောင်နေပါလား။ ကြည့်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော့် ပေါင်ကြားက ညီဘွားကလည်း ခါရမ်းစပြုလာတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မသင့်တော်တဲ့ အချက်ပြမှုအမူအရာမျိုး သူ့ဆီမပြမိအောင်ထိန်း နေပေမဲ့ ကျွန်တော့်စိတ်ကူးထဲမှာတော့ သူ့ရှေ့အသာဒူးထောက် ငပဲကိုအားရပါးရ စုပ်မှုတ်နေပါပြီ။
'မင်းလည်းရေချိုးတော့လေ၊ ရေက အရမ်းနွေးနေတာပဲ' ကျွန်တော်ကတော့ သူ့ငပဲကိုကြည့်ရတာ ရင်ထဲနွေးထွေးနေတာပါပဲ။ သူ ကျွန်တော့်ကို သတိပြုမိပါတယ် တုတ်သော ရှည်လျားလုံးဝန်းသော ထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားတဲ့ သူ့ပစ္စည်းကိုအာရုံစိုက်နေကြောင်း။ ခရီးစဉ် မစခင် လေဆိပ်မှာစဆုံကတည်းက David ဆိုတဲ့ သူနဲ့လိင်ကိစ္စပတ်သက်မှုဖြစ်မလား? ဒါမှမဟုတ် မင်းလို စောက်ခြောက်နှင့် မပတ်သက်ဘူးဆိုပြီး အကန်ခံရမလား? ကျွန်တော်တွေးမိခဲ့တယ်။ အခုတော့ ကျွန်တော်သိရပါပြီ သူနှင့်တစ်ခုခုတော့ ပတ်သက်မိတော့ မှာကို။
ရေပန်းအောက်မှာ ရေနွေးနွေးနှင့် အပန်းပြေပြီးနောက် ရေချိုးခန်းထဲကနေ ကျွန်တော်လှမ်းထွက်ခဲ့တယ်။ David က သူ့ခုတင်ပေါ်မှာ ထိုင်နေတာဗျ။ အမိဝမ်းက ကျွတ်ခါစ ကိုယ်ခန္ဓာအတိုင်းပဲ။ ကျွန်တော် သူ့ရဲ့စွဲမက်ဖွယ် ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ပစ္စည်းကို မကြည့်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ကြိမ်တော့ ခိုးကြည့်မိပါရဲ့။ ကျွန်တော်အမြဲပြောပြောနေခဲ့တဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်။ ငတ်ပြတ်နေတဲ့ သူ တစ်ယောက်အတွက် အားလုံးဟာ အစားအစာပဲဆိုတာ။ ကျွန်တော်ဘာကိုဆိုလိုမှန်း သိမယ်ထင်ပါတယ်နော်။
ကျွန်တော် သူ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ငပဲကို ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေတဲ့ သူဖြစ်လာပြီ။ အဲဒါက -ီး၊ အစားအစာမဟုတ်ဘူး ဆိုပေမဲ့ ကျွန်တော်အဲဒါ ကို ဆာလောင်နေတာပါ။ David ကျွန်တော့်ကို စူးစမ်းတဲ့အကြည့်ကို အပြုံးနဲ့ဖြေဖျောက်လိုက်ပါတယ်။
'ငါ့ကောင် အရမ်းအိပ်ချင်နေပြီကွ မင်းရော?'
နှစ်ယောက်လုံး အိပ်ယာကိုယ်စီပေါ်လှဲလိုက်ကြပြီး အခန်းမီးကို ပိတ်လိုက်ကြပါတယ်။ မျက်စိကိုမှိတ်ပြီး ငြိမ်နေစဉ်မှာပဲ David ရဲ့ အသက်ရှူသံလေးလေးပင်ပင်ကို စကြားရပါရော။ ကျွန်တော် စိတ်တင်းကျပ်မှုကို လက်ကစားပြီး ဖြေဖျောက်ဦးမှပါ။
'မအိပ်သေးဘူးကွ အိပ်မပျော်သေးဘူး။ ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေလို့နဲ့တူတယ်'
အဲဒီစကားတွေပြောပြီးနောက် David ပါးစပ်က ထွက်လာတဲ့နောက်ထပ်စကားလုံးတွေက ကျွန်တော့်ကို အံ့အားသင့်သွားစေပါတယ်။ ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားသွားရတာပါ။
'သိလား Alex အိမ်မှာဆို အိပ်မပျော်တဲ့ စိတ်ရှုပ်တဲ့ညတွေဆို -ွင်းထုပြီး စိတ်ဖြေရတာ'
သုံးလေးမိနစ်လောက် စကားမဆက်ဘဲ ငြိမ်နေပြီးနောက် David က ပြောပြန်ရဲ့။ 'ငါတို့နှစ်ယောက်သား -ွင်းအပြိုင်ထုကြမလား? အရင် ကတော့ ဘယ်သူနှင့်မှ အတူတူမလုပ်ဖူးဘူး' တဲ့။
'အေး....အိမ်မှာနေတုန်းကတော့ ဘော်ဒါနှစ်ယောက်နှင့် လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်ကွ'
ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ပေါ်လွှမ်းထားတဲ့ စောင်တွေဖယ်လိုက်ချိန်မှာတော့ David သူ့ငပဲကိုလက်နှင့်ဆုပ်ကိုင်ထားတာ ငပဲက မာပြီးတောင် လို့။ ကျွန်တော်လည်း ရှက်မနေတော့ဘူး ကိုယ့်ပစ္စည်းကို ကိုယ်ကိုင်ကာ စတင်ကစားပါတော့တယ်။ သူ့မျက်လုံးတွေကို မသိမသာကြည့် မိတော့ David ကျွန်တော့်ငပဲကို အာရုံစိုက်နေတာ သတိပြုမိရပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော့်မျက်လုံးသည်လည်း သူ့ရဲ့ လှပတဲ့ အမျိုးသားပစ္စည်းအပေါ် ကျရောက်နေတာ အကြည့်စူးတွေ။
ဘုရားသခင်၊ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ အရမ်းမာန်ဟုန်မြှင့်လာပါတယ်။ ပြောမလို့....မပြောဘူးနဲ့ နောက်ဆုံးမထိန်းနိုင်စွာ ကျွန်တော် ပြောလိုက်မိပါရော။
'ဟေး David , တစ်ယောက်ယောက်က မင်းဒစ်ကို စုပ်မှုတ်ပေးတာ ခံစားဖူးလား?'
'အင်းစော်နှစ်ပွေတော့လုပ်ပေးဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ငါ့ကိုစိတ်တိုအောင် စိတ်မရှည်အောင်လုပ်ကြတာပဲ။ သူတို့ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက် လက်နဲ့ကစားလိုက်လုပ်ရင်း ခဏရပ်ပြီး ဘာပြောလဲသိလား "ကျွန်မပါးစပ်ထဲပန်းမထည့်နဲ့နော်။ ယောက်ျားတွေ အဲဒီလိုလုပ်ရင် အရမ်း မုန်းတာ" တဲ့။ အဲဒီအပြုအမူကြောင့် ငါ့စိတ်တွေ သွားရောပဲ'
'မင်းအမေးကို ဖြေရရင်တော့ အစုပ်ခံဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပြည့်အ၀မဟုတ်ဘူး'
'ဒါဆို မင်းကံကောင်းတာပဲ။ ငါမင်းပစ္စည်းကို မျိုချချင်နေတာအခု'
သူ့ခုတင်မွေ့ယာပေါ် တွားတက်လိုက်ပြီးနောက် မာပြီးထောင်နေသော ငပဲကို အရင်းကနေဆုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းလေးကို အသာဟပြီး အာခံတွင်းထဲ လျှောကနဲ သွင်းလိုက်ချိန်မှာတော့ David နှုတ်ဖျားမှ ပင့်သက်ရှိုက်သံကိုကြားရပါရော။ သူ့ငပဲက ရှည်ပြီး တုတ်နေတာဆိုတော့ မဆိုးပါဘူး လှုပ်ရှားရတာ။
"Oh shit dude, that's awesome, ughm, oh yeah, ughm, aww…shit.."
ဒီပစ္စည်းဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တစ်ခုတည်းရှိတဲ့ အရာလို့ သဘောထားပြီးအစွမ်းကုန်ပြုစုနေလိုက်တာ David ဘာသံမှမထွက်ဘဲ ပါးစပ်ကြီး ဟကာ မျက်လုံးကိုမှိတ်ထားပါတော့တယ်။ ရွှေနီငှက်ပျောသီးကို စားရသလိုပြည့်ပြည့်၀၀ ပါးစပ်ထဲမှာပြည့်နေတော့ ကျွန်တော်လည်း ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို အသာမျှဉ်းစုပ်လိုက် ငပဲတစ်ချောင်းလုံး အာခံတွင်းထဲထိ သွင်းလိုက်နဲ့ အရသာ good နေတာ ပြောတောင်မပြော ချင် ပါဘူး။ သူလည်း ခါးကိုအသာကြွ ပါးစပ်ထဲ အလိုက်သင့် အသွင်းအထုတ်လုပ်ရင်း စိတ်ပါ လက်ပါ ဆင်နွှဲပါတယ်။ ခဏနေတော့ သူ ကျွန်တော့်ခေါင်းကို ကိုင်ပြီး အထုတ်အသွင်းလုပ်နေခြင်းကို ရပ်ကာ 'ငါ့ကောင်....ငါပြီး....အာ....ပြီးတော့မယ်' လို့ အသံတုန်တုန်နဲ့ ပြော တော့တာပဲ။ ကျွန်တော်လည်း စုပ်နေမှုတ်နေတာကို မရပ် ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်ကနေ ရွှေဥတွေကို နှုတ်ခမ်းသားများနှင့် ထိသည်အထိ လုပ် ပေးလိုက်ပါတယ်။ 'Oh yesss…အား....အ...ရှီး' ခါးကိုအစွမ်းကုန်ကော့ရင်း ကျွန်တော့်အာခံတွင်းထဲ သူ့ရဲ့ချွဲကျိကျိအရည်တွေဖြည့်တင်း ပေးပါရော။ သူ့ပစ္စည်းက နောက်ဆုံးတစ်စက်ကျန်သည်အထိ ထွက်ပြီးမှ လိင်တံထိပ်ဝလေးကို လျှာနဲ့ကလိပေးဖြစ်တာ David တွန့် တွန့်လူးပေါ့။
David အိပ်ယာပေါ်ကို ပစ်လှဲလိုက်ကာ ဘာစကားမှ မပြော အတန်ကြာတိတ်ဆိတ်သွားပါတော့တယ် ခဏတော့။
'Oh my God Alex, ငါခံစားဖူးသမျှ ဖီလင်ထဲမှာတော့ အမြင့်ဆုံးခံစားရတဲ့ဖီလင်ပဲကွာ။ မင်းငါ့ cum တွေမျိုချလိုက်တာလား? ငါတော့ မင်းလုပ်ပေးတာ ကြိုက်သွားပြီထင်တယ်ကွ?'
David က လူကြီးလူကောင်းဆန်သူတစ်ယောက်ပါပဲ။ သူ့အနေနဲ့တစ်ခြားအမျိုးသားတစ်ယောက်ကို ပြန်လည်ပြီး sucking လုပ်ပေး ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ကျွန်တော့်ကို သူ့လက်တစ်ဖက်နှင့် ခံစားချက်မြင့်အောင် ကူညီပြီးဆုံးစေပါတယ်။ နှစ်ဦးသား တစ်ယောက်လက် တွေကြား တစ်ယောက်တိုးဝင်ကာ အိပ်ပျော်သွားကြပါရဲ့ အဲဒီညက။ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာတော့ နှစ်ဦးလုံး လန်းဆန်းစွာ နိုးထဖြစ်ကြ ပါတယ်။
'Alex, မနေ့ညက အဖြစ်အပျက်က မယုံနိုင်စရာပါပဲ။ Thanks'
'Welcome ပါ မင်းအတွက်ဆိုရင်'
David ပါးချိုင့်တွေပေါ်အောင် အားရပါးရပြုံးပါတော့တယ်။ အတော်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့လူ။
ကျွန်တော်တို့ Paris မှာနေကြတယ် တနေကုန်။ ပြီးတော့ Athens ကိုသွားကြတာပေါ့။ ဈေးဝယ်လို့ကောင်းမယ့် နေရာတွေ၊ စတိုးဆိုင် တန်းလို ဖြစ်နေတဲ့ လမ်းသွယ်တွေ တလျှောက် ခြေဆန့်ကြတယ်။ ညနေစောင်းတော့ David ရှေးဟောင်းလက်ရာ ပစ္စည်းဆိုင်ထဲ ၀င် ကြည့်နေတုန်း ကျွန်တော်ဝင်မကြည့်ချင်တာနဲ့ အပြင်မှာ စောင့်ရင်းနေခဲ့ပါတယ်။ ဟိုသည်ကြည့်နေရင်းမှာ မိုက်ကယ်အိန်ဂျယ်လ်လိုရဲ့ ကျောက်ဆစ်ရုပ်အဖြစ်ထုလုပ်ရာမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ အမျိုးသားမော်ဒယ်လ်နှင့် တူသော Greek ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို သတိထားမိ ပါရော။ သူ....သူဟာ နတ်ဘုရားတစ်ပါးနဲ့တူလောက်အောင် အတော်ကြည့်ကောင်းတာပါပဲ။ တီရှပ်ကြပ်ကြပ်နှင့်အတူ Levi's ဂျင်းကိုဝတ် ထားတာပေါင်ကြားက အထုပ်အထည်ကဖောင်းနေရော။ ကျွန်တော်သူ့ကို အာရုံစိုက်နေမှန်းသိတော့ သူ့ဘောင်းဘီက ကြယ်သီးတွေကို အသာပွတ်သပ်ပြပါတယ်။ ကျွန်တော်သူရှိရာကိုလည်း လျှောက်သွားရော အဆောက်အအုံကြီးရဲ့ ဘေးလမ်းကြားထဲ လိုက်ခဲ့ဖို့ ဟန်နှင့် ရှေ့ကလျှောက်သွားတယ်လေ။
သူ့နောက်ကို ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့တာ နည်းနည်းစိုးရိမ်နေပေမဲ့ လမ်းကြားထဲ ကျွန်တော်တို့ ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ လူတစ်ယောက် မှမရှိပါဘူး အဲဒီနေရာမှာ။ အသာအနားကပ်သွားရုံရှိသေး ကျွန်တော့်ကိုဆွဲဖက်လိုက်ကာ နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းပါတော့တယ် အရူးတစ် ယောက်လို။ အနမ်းကို အမုန်းစွဲပြီး နောက်တစ်ဆင့်က ကျွန်တော့်လက်တွေို့ သူ့တီရှပ်ထဲသွင်းကာ အံအားသင့်ဖို့ကောင်းတဲ့ ကြွက်သား ဆိုင်တွေကို ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ် ခံစားဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဂျင်းဘောင်းဘီကြယ်သီးတွေကို ဖြုတ်တာပေါ့ တစ်လုံးခြင်း။ မာတောင်နေတဲ့ ငပဲနွေးနွေးကို အသာကိုင်ကြည့်လိုက်တော့ David ဟာနဲ့မတူ သူ့ဟာကတစ်မျိုး ကျစ်လစ်နေလိုက်တာ။
နံရံကို မှီပြီးကောင်လေးငြိမ်နေတာကိုမြင်ရတာ ရောမကျောက်ဆစ်ရုပ်ထက်သာတယ်။ ငပဲကို အသာကိုင်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ငှင်လုပ် ကြည့်တော့ လိင်တံထိပ်အရေပြားဖြတ်မထားတာသိရပါရော။ ကောင်းပါ့....ထိပ်အရေပြားလေးကို 'ရှလွတ်' ကနဲစုပ်ကာငပဲတစ်ချောင်း လုံး အာခံတွင်းထဲအဆုံးသွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်လုပ်လိုက်တာ တစ်မိနစ် နှစ်မိနစ်ပါပဲ သူ့နှုတ်ခမ်းသားများက ညည်းတွားသံထွက်လာ သလို တင်ပါးကျစ်ကျစ်တွေကို လှုပ်ရှားကာ အာခံတွင်းထဲထိ ရှန်တိန်လုပ်ပါတော့တယ်။ ထိပ်လေးကို လျှာနဲ့သပ်လိုက်ရုံရှိသေး ဒီ ကောင်လေးခမျာ မထိန်းနိုင်ဘဲ semen တွေကိုပန်းထည့်လိုက်ပါရဲ့ ပါးစပ်ထဲအပြည့်။ ကျွန်တော် ခဏငုံထားပြီးမှ မသိမသာထွေး ပစ်ရတာပေါ့လေ။
ကျွန်တော် အသာထရပ်လိုက်တော့ သူကျွန်တော့်ရှေ့ကိုတိုးလာပြီး ဒူးထောက်လိုက်ပါတယ်။ ဂျင်းဘောင်းဘီပေါင်ခွဆုံမှာ ရုန်းကန်ပြီး ဖောင်းနေတဲ့ ကျွန်တော့်ညီဘွားကို အပေါ်ကနေ လက်နဲ့အသာပွတ်သပ်ပြီး စိုက်ကြည့်နေသေးတာ။ ပြီးမှ ဘောင်းဘီဇစ်ကို အသာဆွဲ ဖွင့်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ အမြှောက်တံကြီးကို တပ်မက်စွာကိုင်တွယ်ရင်း သူ့နှုတ်ခမ်းလွှာတွေထဲသွင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော် ကျောမှီနေတဲ့ နံရံပေါ် နောက်ပြန်တွားတက်သွားမိသလို ခံစားလိုက်ရပါရဲ့ ကောင်လေးရဲ့ လျှာဖျားနှင့် ပါးစပ်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုများမှာ။ ကျွန်တော်လည်း ကြာရှည်မထိန်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး ဖြစ်ပျက်နေတဲ့နေရာ၊ အချိန်နှင့် စိတ်လှုပ်ရှားရမှုများကြောင့် သုံးလေးမိနစ်အကြာ လောက် မှာပဲ သူ့ရဲ့နှုတ်ခမ်းများနှင့် အာခံတွင်းထဲ ရေတံခွန်တစ်ခုလို လျှံကျလိုက်မိပါတယ်။ တဆစ်ဆစ်ထွက်နေသမျှကိုရော ပန်းထည့်ထားတာ ကိုရော မျိုချပစ်လိုက်တာပါပဲ။ နှစ်ဦးသားအကြည့်ဆုံနေပြီးနောက် ဘောင်းဘီတွေပြန်ဝတ်ကာ လာရာလမ်းအတိုင်း ပြန်ထွက်လာခဲ့ကြ တယ်။ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်ဘက်ရောက်တော့ David က ဆိုင်အပြင်မှာရပ်ပြီး စောင့်နေရဲ့။ ကျွန်တော်လည်း Greek ကောင်လေးကို David နှင့်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီး တခါတည်း နေ့လည်ခင်းအချိန်ကို အတူတူဖြုန်းကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပေါ့။ ကောင်လေးကလည်း သဘောတူလက်ခံပြီး ကျွန်တော်တို့ကို Athens မြို့တလျှောက် tour guide လုပ်ပေးပါတော့တယ်။
မြို့ကြီးဟာ တစ်ခေတ်တခါတုန်းက အရမ်းကို ခမ်းနားခဲ့မှာပါပဲ။ အဆောက်အဦးကြီးတွေဟာ ကြီးမားလှပြီး တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာရှိတဲ့ တိုင်လုံးတွေနှင့် Parthenon ကျောင်းကြီးဟာ အထင်ကရပါပဲ။ ကောင်လေးဟာ သမိုင်းနှင့်ဆိုင်သောနေရာအားလုံးဆီ ကျွန်တော်နှင့် David တို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားတာဗျ။ ဒါကြောင့် Athens ထဲမှာ ရှိသမျှ စိတ်ဝင်စားစရာနေရာအားလုံး ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ပျော်ဝင်ခဲ့ ကြပါတယ်။ တနေကုန်နီးပါး လျှောက်သွား မစားဖူးတဲ့ဒေသအစားအစာကို မြည်းလိုက် လုပ်နေလိုက်တာ ညနေစောင်းတော့ ကျွန်တော် တို့ တည်းခိုရာ ဟိုတယ်အခန်းကို ပြန်ခဲ့လိုက်ကာ ကောင်လေးကို တစ်ခွက်တစ်ဖလားကစ်ဖို့ David ကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ အခန်း ပြန်ရောက်တော့ အထုပ်အပိုးတွေ နေရာတကျထားလိုက်ရင်း အလှည့်ကျရေချိုးခန်းဝင်ကြရတာပေါ့ ချွေးစော်တွေနံနေမှကိုးလေ။
အခန်းထဲ တီဗီ channel တစ်ခုကလာသော သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ခပ်တိုးတိုးဖွင့်ရင်း သုံးယောက်သား အခန်းထဲငြိမ်သက်နေကြတာ အချိန် အတော်ကြာပါတယ်။ ဆိုဖာတစ်ခုပေါ် ခပ်လျော့လျော့လှဲနေတဲ့ Greek ကောင်လေးရဲ့ ဘော်ဒီကို ကြည့်မိတော့ ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲ သွေးခုန်နှုန်းတွေ ပိုမိုမြန်ဆန်လာပြန်တာ ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ ည၀တ်အင်္ကျီရဲ့ ဘယ်ဘက်ရင်အုံနေရာတောင် တဆတ်ဆတ် တုန်လာတဲ့ အထိ။ David ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ သူတီဗီဖန်သားပြင်ကအဆိုတော်ကို အာရုံစိုက်ကြည့်နေတယ်လေ။ ရုတ်တရက် ကျွန်တော့် မျက်ဝန်းတွေဆီ Greek ကောင်လေးမော့ကြည့်ချိန်မှာတော့ မလုပ်နဲ့လို့ ထိန်းနေတာတွေ အဝေးရောက်သွားပြီး သူ့ဆီ လှမ်းသွားကာ ပန်းသွေးရောင်နှုတ်ခမ်းလွှာတွေကို တပ်မက်စွာ နမ်းရှိုက်မိပါရော။ နှစ်ဦးသား ပြင်းပြတပ်မက်စွာနမ်းရှိုက်ရင်း လုံးထွေး နေကြတာ David လှည့်ကြည့်ကာ ငြိမ်နေပြီးမှာ သူပါ ပါဝင်ဆင်နွှဲပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေ နောက်ဆယ်မိနစ်အကြာမှာတော့ ခုတင်ပေါ်မှာ အ၀တ်မပါ အမေမွေးတုန်းက ပုံစံအတိုင်း ကျွန်တော်တို့ဖာသာရှာဖွေ တွေ့မိကြပါတယ်။ မကြာပါဘူး ကောင်ငယ်လေးဟာ ခရေပွင့်ကိုကြွေအောင်ချွေတာ ကျွမ်းကျင်လှကြောင်း ကျွန်တော်သိရပါရော။
မတ်ထောင်နေတဲ့ David ငပဲကို ကျွန်တော် အာခံတွင်းထဲ အပူဓာတ်ပေးချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဧည့်သည်ကောင်ငယ်လေးက ကျွန်တော့်နောက်ဘက်ကို နေရာရွှေ့ကာ ခရေပွင့်ကို သူ့လျှာနွေးနွေးဖြင့် မုန်တိုင်းဝင်ပါတော့တယ်။ David ငပဲကို အာခံတွင်းအထုတ် အသွင်းမလုပ်နေတော့ပါဘူး....ပါးစပ်ကိုဟကာ လျှာပန်ကာမွှေ့မှုအပေါ် မျောနေရပါရဲ။ တင်ပါးနှစ်ခုကို အသာကိုင်ဖြဲရင်း Lube တွေညှစ် ထည့်လိုက် ကောင်လေးက လက်ညှိုးလေးကို အထုတ်အသွင်းလုပ်လိုက် လုပ်ချိန်မှာ သွားပြီ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး အဆိပ်တက်ပြီ။
တင်းကျပ်နေတဲ့ ခရေကြွက်သားတွေထဲ Greek လေးဟာ သူ့ငပဲမပျော့မမာကို အသာဖိပြီးသွင်းလိုက်တာ အသွင်းမခံတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲဟိုက်ကနဲ လိုလို ဟာဆင်းသွားသလိုလို ဖြစ်ရပါတော့တယ်။ ကွမ်းသီးခေါင်းကနေ အဆုံးထိ ဖိသွင်းလိုက် ပြန်ထုတ်လိုက် တစ်ချက်ခြင်းလုပ်နေတာများ ငါးပါးသော အာရုံမှာ တဆိမ့်ဆိမ့် ဖီလင် အရှိန်မြင့်ရတယ်။
ဒီကောင်လေးဟာ အတော်အထာနပ်တဲ့ သဘောမှာရှိပါတယ်။ အောက်ကနေသူ ကျွန်တော့်အတွက် နာလိုခံခက်မဖြစ်ရအောင် လုပ်နေ ခြင်းက ဆရာပါပဲ။ 'ရှီး....so good!' မိနစ် ၂၀ အချိန်ကြာသောအခါမှာတော့ ကျွန်တော့် David ရဲ့ငပဲကို အရူးအမူး စုပ်မှုတ်ပေးမိလာ သလို Greek ကောင်ငယ်လေးရဲ့ ဆောင့်သွင်းချက်တွေဟာ အမြန်နှုန်းမြင့်လာပါတော့တယ်။ အသက်ရှူသံ ပြင်းပြင်းနှင့်အတူ အဆုံးထိ ဖိကပ်ပြီး သူ့အားအင်တွေ အကုန် ကျွန်တော့်ကို ဖြည့်ပေးပါရော။ ခရေကြွက်သွားတွေနှင့် အတန်ကြာ သူ့ငပဲကို ညှစ်ပြုပြီးမှ လွှတ်ပေး လိုက်တာ ပိုမိုကောင်းမွန်ဲ့ ဖီလင် သူရသွားတာပေါ့လေ။
ကောင်ကလေး သူ့ဟာကို ဆွဲထုတ် အဖော်ကိုချွတ် အိပ်ယာဘေးက အမှိုက်ပုံလေးမှထည့် အသေကောင်လို နောက်ပြန်လှဲချလိုက်ချိန်မှာ တော့ David တစ်ယောက် ကျွန်တော့်အာခံတွင်းမှ သူ့ငပဲကို ဆွဲနှုတ်ကာ 'ငါလည်း လုပ်ကြည့်ချင်တယ်' ဆိုပြီး လေးဘက်ထောက်ထား သော ကျွန်တော့်နောက်ဖက်ကို နေရာရွှေ့ပါတော့တယ်။ သူ့ငပဲက နည်းနည်းတုတ်တာကြောင့် အစပိုင်းမှာ ဖြည်းဖြည်းဖိသွင်းနေပေမဲ့ အထုတ်အသွင်း အဆင်ပြေချိန်မှာတော့ David တစ်ယောက်မြင်းစီးသလို ကဆုန်ဆိုင်းပါရော။ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး သူဆင်နွှဲပြီး ခဏ အကြာ မှာတော့ သူလည်းပဲ တစ်ကိုယ်လုံးတုန်ခါကာ ခါးကိုကော့လိုက်ရင်း အမြင့်ဆုံးပန်းတိုင်ကို တက်လှမ်းရရှိသွားပါတော့တယ်။ နှစ်ဦးသား မောလျ ရင်ခုန်စွာ အိပ်ယာပေါ် ပစ်လှဲကြတာပေါ့ ခဏတော့။
တဘက်စိုတစ်ထည် ရေချိုးခန်းမှ ထယူကာ စီးကပ်ကပ် ဖြစ်နေတဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရပါတယ်။ 'ဟူး.....' ကျွန်တော့်ခန္ဓာ ကိုယ်ကို အသုံးချပြီး သူတို့နှစ်ဦး ပျော်ရွှင်မှုရကြတာ ကျွန်တော်သည်လည်း နှစ်သက်ဝမ်းသာရပါ၏။
ချစ်လှစွာသော Greek သူငယ်ချင်းကောင်လေးဟာ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် Athens မှာရှိနေစဉ်အတွင်း အစဉ်တစိုက် အတူအဖော်ပြု ပေးသလို အချင်း ချင်းကို အသုံးပြုကြပါတယ် cum dump တစ်ခုဖြစ်အောင်။ အဲဒီလို ခေါ်ချင်လည်းရသပေါ့လေ။ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ် ခရီးစဉ်တစ်ခုကို ဥရောပတိုက်ဆီ ဖြတ်သန်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး Athens ကတော့ အမှတ်ရစရာအကောင်းဆုံးမြို့ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ လည်ပတ်သမျှမှာ။
ညစဉ်တိုင်း လည်ပတ်ရာမြို့တွေတိုင်း David နှင့်ကျွန်တော် ပျော်ပျော်ပါးပါး လျှောက်လည်ဖြစ်ကြတယ်လေ။ အရာအားလုံး အဆင်ပြေတဲ့ ခရီးစဉ်ပါပဲ။ David နဲ့ကျွန်တော် နေထိုင်ရာ ပြည်နယ်ခြင်းမတူကြပေမဲ့ ခရီးစဉ်အပြီး ပြန်လာချိန်မှာလည်း အရင်းနှီးဆုံး မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
လာချင်ရင်အနီးလေးတဲ့။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် အတွက်တော့ တကယ့်နီးနီးလေး...။
Alex Aung ( 10-11-10)